मलेसिया पुगेको पाँच दिनमै मानसिक सन्तुलन गुमेपछि.... - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मलेसिया पुगेको पाँच दिनमै मानसिक सन्तुलन गुमेपछि….
भदौ १७, जुम्ला । यसअघि पैसा कमाउन उनी भारतमै जान्थे । गरिब परिवारको जीवनलाई त्यहाँको कमाइले कहिल्यै पुगेन । कठिन संघर्षका साथ १२ कक्षामा पढ्दै गरेका मानसिङ सुनारको थोरै पैसा भए पनि स्वदेशमै रोजगारी गर्ने इच्छा थियो तर त्यस्तो नोकरी कतै मिलेन । बेरोजगार बसेर घर नचल्ने भएकाले उनलाई पुनः विदेशिनुको विकल्प थिएन ।
यसअघि घरमा उनकी श्रीमती सपनाको मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो । उनलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन ऋणको जोहो गर्नुपुयो । झण्डै रु एक लाख २५ हजार खर्च गरेर श्रीमतीलाई निको पारेका उनले ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न विदेश जानुपर्ने नै थियो ।
खेतबारीको उत्पादनले तीन महिना जीवन निर्वाह गर्न धौधौ हुने उनको परिवारका लागि राहदानी बनाउनदेखि काठमाडौँ भएर विदेश जानु पहाड ढाल्नु जत्तिकै थियो । तथापि निकै हारगुहार गरी दुई महिना लगाएर सयकडा रु चार/पाँच ब्याज दिनेगरी रु एक लाख ५० हजार ऋण प्राप्त गरी जस्मिन ओभरसिज प्रालि वसुन्धरा काठमाडौँमार्फत गत साउन १७ गते उडान भरेका उनी १८ गते मलेसिया पुगे । दुर्भाग्य ! पुगेको पाँच दिनपछि नै उनको मानसिक सन्तुलन गुम्यो ।